Toetra fototra 9 izay mamaritra ny toetran'ny sary famantarana | Famoronana an-tserasera
Ny fitsaboana omena ny sary famantarana dia mamaritra ny dikany rehetra ananan'ny marika sy ny votoatin'ny orinasa iray. Ny fitsaboana dia miteraka toetra manokana sy fomba fijery manokana. Ny tatitra navoakan'i Siegel + Gale dia manome antsika ny famakafakana ireo toetra sy teknika ireo amin'ny fananganana logo. Ankoatr'izay, izy io dia misafidy ireo logo sivy tsy hay hadinoina indrindra amin'ny fotoantsika, miavaka eo an-tampony, araka ny mety antenaina, ny logo an'ny Nike, Apple, Coca-Cola ary McDonalds. Na izany aza, nanipika ihany koa izy fa ny logo an'ireo orinasa hafa manana teti-bola mitovy amin'izany dia tsy nahomby. Ireo logo ireo dia an'ny Google, Adidas, Pepsi, Microsoft na Amazon ankoatry ny hafa.
Amin'ny maha iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny logo sasany hahomby kokoa noho ny sasany dia mahita fahatsorana izahay. Ny sary famantarana matanjaka, lehibe ary mahomby dia tokony ho ambonin'ny zava-drehetra tsotra, na dia mazava ho azy aza fa misy ny maningana toy ny tamin'ny raharaha Coca-Cola, na dia marina aza fa rehefa miteny Coca-Cola isika dia miresaka teny lehibe kokoa ary angamba ilay tranga lehibe indrindra. amin'ny marketing tamin'ny taonjato lasa. Na izany na tsy izany dia azonao atao ny misintona an'ity tatitra mahaliana ity avy amin'ny tranokala ofisialin'i Siegel + Gale avy amin'ity adiresy ityAmin'izao fotoana izao, avelako ianao miaraka amin'ny fitsaboana sivy na maodely logo izay manaitra andianà dikany tena voafaritra:
1 Toro-teny manokana
2 Logo voajanahary
3 Sary famantarana Geometrika
4 Wordmark Sans Serif Logos
5 Logos miaraka amin'ny Wordmark Serif
6 Logos natsofoka tao anaty endrika na bobongolo
7 Logos noforonana tamin'ny alàlan'ny inisialy
8 Toro-teny miorina amin'ny endritsoratra tsotsotra
9 Fango stylized misy effets visuels
Rehefa miresaka momba ny mari-teny isika dia mijery an'io sokajin'ireo logo voafaritra amin'ny alalàn'ny litera io, na inisialy na teny, ary tsy mampiseho singa hafa ankoatry ny typography. Ity tsangambato ity dia azo namboarina sy noforonina tamin'ny endritsoratra manokana sy manokana ho an'ilay logo. Ny tranga Instagram dia ohatra tsara. Ireo karazana tolo-kevitra ireo dia misy endrika mampiavaka azy: manome antsika fahatsaram-panahy (indrindra satria endritsoratra an-tànana), mahafinaritra (satria ny fizotry ny famoronana dia tafiditra ao anaty ny endrika), ny maoderina, ny fanavaozana ary ny tanora ary koa ny fomban'izy ireo sy tsy manam-paharoa. toetra ...
Anisan'ireo toetra mampiavaka azy no ahitantsika ny hafanana, ary koa ny fikarakarana satria io karazana endrika io dia mampiseho ny fizotry ny famoronana nofenoina tandindona sy fanoloran-tena avy amin'ny mpamolavola. Toy izany koa, ny fananganana logo voajanahary dia manolotra lahateny feno fahafinaretana satria amin'ny lafiny sasany koa dia haingo, mamorona ary manaitra ny fientanentanan'ny fahazazana ary koa ny tsy fananan-tsiny, hatsaram-panahy ary, mazava ho azy, fanavaozana.
Sary famantarana Geometrika
Ambonin'ny zava-drehetra, ireo karazana tolo-kevitra ireo dia madio indrindra, miaraka amin'ny famaranana marina, marina ary mahavita tena. Ho fanampin'izany, ny fampifangaroana ny haitao miaraka amin'ny matematika dia mahatonga ny foto-kevitry ny faharanitan-tsaina tsy voatanisa ary noho izany dia manaitra ireo akora hafa toy ny hery. Ny faharanitan-tsaina dia fahefana fa ny fankatoavana sy ny fanajana ara-tsosialy ihany koa, miaraka amin'izay dia mazàna minimalistes ireo karazana firaketana ireo nefa tsy dia miroborobo loatra, koa miresaka momba ny fahasalamana sy fahaleovan-tena koa isika.
Wordmark Sans Serif Logos
Ny sans serif typeface, na tsy misy serif, dia mahonon-tena, mitady mihoatra ny zava-drehetra fahadiovana, concreteness ary manery ny mpandray mba hametraka ny tenany amin'ny teny. Na izany na tsy izany dia milaza amintsika izany fa zava-dehibe ny lazain'ny sary famantarana antsika, ary tsy izany ihany fa fohy sy mampiorina fahatokisan-tena. Izy io koa dia mifandraika amin'ny fiaviana nentim-paharazana kokoa ary misy fifandraisana teknika na ara-tsiansa mihitsy aza satria ny karazana firavaka ao amin'ny typografia dia nariana. Mifantoka amin'ny hevitra, ny azo ampiharina ary azo tsapain-tanana izahay. Ankoatr'izay, ny fahatsoran'ny endrika sy ny fahalavorariana amin'ny famaranana dia manaitra antsika hatsaram-panahy.
Logos miaraka amin'ny Wordmark Serif
Eto isika dia amin'ny tranga mifanohitra tanteraka amin'ilay voalaza etsy ambony. Ny serif dia mifangaro sahala amin'ny fiafaran'ny nerveo fa tsy misy tanjona azo ampiharina na ampiasaina. Ny tanjona dia ny hanomezana singa maha-kanto, endrika izay mampahafantatra ny maha-izy azy manokana ny marika misy antsika miaraka amina toetra nentim-paharazana sy raitra. Ny estetika dia ampahany manandanja amin'ny foto-kevitsika ary koa ny hatsaran-tarehy, ny laharam-piarahamonina ary ny fivoarana.
Logos natsofoka tao anaty endrika na bobongolo
Ireo fanamboarana ireo dia mampatsiahy ireo lasitra taloha izay nampiasain'ny mpanao kopia tamin'ny famolavolana ireo sora-tanana voalohany tamin'ny tantarantsika, noho izany tamin'ny minitra zero dia nahita firesahana ny nentin-drazana isika ary mazava ho azy ny famolavolana ho fikolokoloana ny endrika sy ny fandikana ireo hevitra amin'ny alàlan'ny maso. fiteny. Izy io dia mitondra karazana toetra voajanahary toy ny originality, fahatokisana ny vokatra ary koa ny fanakaikezana ny fizotran'ny famoronana ary noho izany ny fanakaikezana ny sary famantarana.
Logos noforonana tamin'ny alàlan'ny inisialy
Ara-toekarena izy ireo ambonin'izany rehetra izany amin'ny sehatry ny fifandraisana ary noho izany manapaka. Izy ireo dia apetraka amin'ny fomba fijery tsotra ary noho izany dia mandany ny fahefana sy ny maha-lehilahy. Ny herisetra anehoana azy dia manaitra ny fanajana ny mpijery izay mahatsapa fa vetivety dia eo alohan'ny marika amam-boninahitra ekena izy ireo ary tsy mila firavaka na fanamboarana tafahoatra mba hampazava ny endrik'izy ireo.
Toro-teny miorina amin'ny endritsoratra tsotsotra
Izy io dia voarafitra ao amin'ilay tsipika hitantsika tamin'ny ohatra teo aloha. Mahita fanazaran-tena amin'ny toekarena mifampiresaka izahay izay miteraka fahatsapana hery, noho izany dia matoky ny marika ny mpijery ary manome azy toe-javatra miavaka ary koa toetra nentim-paharazana sy madio.
Fango stylized misy effets visuels
Ireo dia fananganana misimisy kokoa izay mirona ho tena tany am-boalohany ka mahafinaritra ny akora ao anatiny (noho ny fahaiza-mamorona hita taratra amin'ny endriny), ny fanavaozana, ny fahatanorana ary ny fahatanorana, ary koa ny fikarakarana manokana hatsarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Toetra fototra 9 izay mamaritra ny maha-izy azy ny sary famantarana